विद्यालय सुधारका लागि लगाईएको महायज्ञबाट डेढ करोड बचत, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
विद्यालय सुधारका लागि लगाईएको महायज्ञबाट डेढ करोड बचत
घोराही । विद्यालय सुधारका लागि गत माघ ३ देखि ११ गतेसम्म घोराहीमा सम्पन्न महायज्ञबाट आयोजकले सबै खर्च कटाइ रु डेढ करोड बचत भएको छ।
महायज्ञ मूल आयोजक समितिले आइतबार घोराहीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी महायज्ञको आयव्यय सार्वजनिक गरेको हो।
विद्यालयको भौतिक सुधार र प्राविधिक कक्षा सञ्चालनका लागि बराह क्षेत्र माध्यामिक विद्यालयले आयोजना गरेको महायज्ञमा रु एक करोड ५० लाख बचत भएको समितिका निर्देशक अर्जुन बुढाथोकीले जानकारी दिए।
आयोजकले सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति गर्ने भन्दै श्रीमद्भागवत धनधान्याचल विराट ज्ञान महायज्ञ सञ्चालन गरेको थियो।
जसमा विभिन्न व्यक्तिको दान, चौरासी पूजा, रुद्रीपूजा, लाखबत्ती, दैनिक पूजा, आरती, कलश बिक्री, तुलादान, भूमिदानलगायतबाट रु एक करोड ९१ लाख २७ हजार ६ ५३ सङ्कलन भएको हो। त्यस्तै कलाकार, ब्राम्हण, बाचक, सूचना, खानालगायतमा रु ४० लाख ७२ हजार खर्च भएको आयोजकले जनाएको छ।
महायज्ञकी संयोजक विमला योगीले सामुदायिक विद्यालयको भौतिक सुधार र प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनका लागि आयोजना गरेको महायज्ञ सफल भएको भन्दै सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यावाद दिए। साथै उनले आफूहरुले अब छिट्टै विद्यालय सुधारको काम थाल्ने जानकारी दिए।